SRRC: HESHIISKII 29kii JANAAYO WAA NALAKU KHIYAAMAY, MANA OGOLAAN DOONO
Misayoka: Cidii diidda heshiiska waxaa lagu soo rogi doono cunoqabteyn
Kolonzo Misayoka:-Hogaamiyihii Diidaa Saxiixa Heshiiskii STATE HOUSE waxaa la.....
Wasiirka wasaarada Arimaha Dibada Dalka Kenya kolonzo Misayoka ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtey hoolka shiraraka ee wasaarada arrimaha Dibada ee magaalada Nairobi. Wasiirka ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in shirka wadahadalada Nabada Soomaaliyeed shaqsiyaad ama koox u xayirnaan doonin, shirkana maalmo ka dib halkiisa ka sii socon doono.
Shirkan jaraa'id oo uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya kuna qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa sheegay in heshiiskii 29kii January uu ahaa mid taariikhi ah uuna goobjoog ka ahaa madaxweynaha Kenya, xubnaha beesha caalamka,iyo urur gobaleedka IGAD iyo madaxweynaha Uganda.
Shirkan jaraa'id waxaa goobjoog ka ahaa xubnaha IGAD beesha caalamka, Midowga Africa, Midowga reer Yurub iyo wakiilo ka socday dowladaha Eritrea, Djibouti iyo Kenya, iyadoo Itoobiyana ay ka maqneyd. Misayoka wuxuu sheegay inaysan shirka hor'istaagi karin kooxo dano gaar ah leh isagoo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan dowlad ka dhalata shirka loo fadhiyo halka sano inta ka badan.
Misayoka waxa uu sheegay in cidii diidda (heshiiska) lagu soo rogi doono cunoqabteyn, isagoo sheegay inaysan aheyn cabsi galin."Waxaan u haynaa cadeymo ah gumaadkii ay geysteen hogaamiyayaasha ka hor'iminaya shirka dib u heshiisiinta oo doonaya inay burburiyaan heshiiskii taariikhiga ahaa" ayuu yiri Misiyoka.
Dhinaca kale, IGAD ayaa ka codsaday Qaramada Midoobay inay qoraal ka soo saaraan heshiiskii ay dhawaan hogaamiyayaasha Soomaaliyeed ku gaareen Nairobi.
Shirkan jaraa'id ayaa lagu sheegay in dhawaan uu bilaabmi doonaa wajiga seddaxaad ee shirka.
Qaar Katirsan SRRC oo Shir Jaraa'id Ku Qabtay Nairobi
Qaar ka tirsan SRRC-da oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in lagu khiyaamay heshiiskii 29kii January ee hogaamiyayasha saxiixeen.
Shirkaasi jaraa'id oo ay SRRC-da ku qabteen hotel ku yaala Nairobi ayna ka soo qeybgaleen xubno uu ka mid yahay Col. Cabdulaahi Yuusuf Axmed, Gen. Morgan, Sheikh Aadan Madobe iyo xubno kale ee Golaha SRRC-da ayey ku sheegeen in heshiiskii 29kii January uu ahaa mid lagu khiyaamay isla markaana aysan ogolaaneynin.
SRRC-da ayaa sheegtay in aanay aqbaleynin madaxadweynaha DKMG ah uu saxiixo heshiiska isagoo madaxweynaha Soomaaliya ah uuna barbar fariisto madaxweynaha Kenya.
SRRC-da ayaa sheegtay in waxyaabaha lagula heshiiyay ay ka mid tahay in DKMG ah ay noqon doonto labo qeybood oo kala ah kuwii hore u joogay shirka oo kala ah Xasan Abshir iyo Cabdalla Deerow Isaaq iyo madaxweynaha DKMG ah wafdiga uu hogaaminayaya.
SRRC-da ayaa sheegtay inay aqbashay 24 hogaamiye oo lagu daray madaxweynaha ay xulitaanka baarlamaanka ka qeybqaataan iyagoo xusay waxyaabihii la soo bandhigay 29kii January in ay ahaayeen waxyaabo aanay horay ula soconin isla markaana wixii go'aanka ku gaareen habeen ka hor iyo wixii la soo hordhigay oo ay saxiixeen ay kala yihiin labo qoraal oo aan isku dhaweyn.
SRRC-da waxay kaloo sheegeen in xubnaha beesha caalamka iyo IGAD ay u gudbiyeen in la saxo dhammaan wixii qalad ay iyaga ku tilmaameen kulankii Wadatashiga ee 18ka maalmood ka socday Nairobi inuu yahay mid lagu guuldareystay.
Shirka jaraa'id ee SRRC-da ayaa ku soo beegmay saacado kaddib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya uu sheegay in aan dib loogu noqoneyn wixii lagu heshiiyay 29kii January ciddii ka hor'imaantana la cunoqabteyn doono isagoo ka codsday Golaha Ammaanka in tallaabo liddi ku ah dadka ka hor'imaanaya nabadda ay baaq ka soo saaraan.